Ma la oggolyahay inaad ka dhaaftid ama ka baastid garigaan dhinaca midig?
Xaaladee kamid ah xaaladahaan ayay haboon tahay in la adeegsado waddada geeskeeda si loogu fududeeyo gaari kale oo ku baasayo ama ku dhaafayo?
Maxay sheegayaan markay labadan calaamadood ee waddadu is raacaan?
Lama oggola in la dhigto ama lagu baarkimo calaamadahaan ka hor
Lama oggola in la istaago calaamadahaan ka hor
Lama oggola in la istaago calaamadahaan ka dib
Lama oggola in la dhigto ama lagu baarkimo calaamadahaan ka dib
Ma haboon tahay in darawalka taraafiga ku cusubi inuu masaafo fiican ku wado oo ka badan inta darawalka khibradda leh?
Maya, darawal taraafiga ku cusub sida badan waa ka baraarugsan yahay oo ka foojigan yahay darawalka khibradda leh
Maya, xilli-maalmeedka ayaa xukuma ama go'aamiya masaafada habboon in lagu wado
Haa, darawalka cusub wuxuu sida badanu baahan yahay wakhti ka badan si uu u qiimeeyo dhacdooyinka waddada
Sidee ula dhaqmaysaa qofkaan lugaynaya ee xaaladaan?
Waxaan dhimayaa xawaaraha oo raadinayaa inaan isha kala xiriiro lugeeyaha
Waxaan u yeerinayaa hoonka si aan u helo foojignaateeda
Waxaan usii wadayaa horay, maadaama aan ka gaaro inaan maro horteed
Waxaad u wadaysaa tooska hore ee isgoyskaan. Baabuurtee ayaa kaa leh waddada?
Baabuurta hortayda ka imaanaysa ee bidix u leexanaysa
Baabuurta ka imaanaysa dhinaca midig oo kaliya
Baaburta ka imaanaysa dhinaca midig iyo dhinaca bidixba
Baabuurta ka imaanaysa dhinaca bidix oo kaliya
Waxaad 10 mitir ka dambaysaa baskan oo dhererkiisu yahay 10 mitir, waxaadna ku waddaa xawaare dhan 50 km/tim. Ma ka gaartaa inaad istaagtid haddii ilmo yari baska hortiisa kasoo ordo?
Maxaa waddadaan khuseeya?
Waa la oggolyahay in lagu wado waddadan haddii la soo qaadayo qof deggan waddadan dhinaceeda
Darawaliinta baabuurta waxaa ka leh oo ay ka leexanayaan baaskiil wadayaasha
Gaadiidku waa inuu ku soo socdo ugu badnaan 30 km/tim
Looma oggola wax gaadiid ah waddadan
Waxaad ku timid meel shil ka shacay. Sidee bay haboon inaad u caawisid qof miir la' oo si caadi ah u neefsanaya oo wadno garaaciisuna joogto yahay?
Qofka waxaan u dhigayaa dhabar-dhabar oo saarayaa buste
Waxaan qofka u jiifinayaa si xasillan oo dhinac-dhinac ah
Waxaan isla markiiba ku bilaabayaa badbaadinta lagu kiciyo wadnaha
Waan ruxayaa ama lulayaa qofka ilaa uu miirku kasoo noqanayo
Waxaad bilawday inaad gaarigoo damsan ku jiidid gaari kale. Arrintani saamayn noocee ah ayay ku yeelaan kartaa jiiditaanka?
Waxay noqonaysaa inaan adeegsado awood dheeraad ah marka aan biriigga qabanayo
Lugaha ayaa si sahlan isu xiri kara markaan biriigga qabto
Biriiggu maba shaqaynayo
Waxaa la joogaa bisha janaayo (januari). Maxay tahay sababta ugu muhiimsan ee ay tahay inaad u haysatid taayirada barafka oo leh gun fiican xaaladaan?
Khatarta in la simbiririxdo ama la siibto ayaa ka yar inta taayirada samarka ama xagaaga
Baabuurka biriigiisa ABS-ka ayaan shaqaynayn haddii kale
Waxaan ku wadi karaa xawaare ka dheerayaa kan taayirada samarka ama xagaaga
Ganaax ayaa la ii jarayaa haddii kale
Sawirkee baa sax tusinaya?
Maxay tahay inaad diyaar u ahaatid inuu qofka lugeeyaha ahi inuu samayn karo?
Inuu taagnaan karo oo i sugi karo si aan anigu u hor maro
Inuu wadada goyn karo
Qofkee kamid ah dadkaan ayaa sida badan ku noqda khatar weyn waddooyinka ama taraafiga?
Qof is-xakamayn kara
Qof isku kalsooni fiican leh
Qofka u oggolaada darawaliinta kale inay khaldami karaan
Qofka raadiya xiisad iyo tacabbir
Xadka xawaare ee waddadan aa ku socotid waa 70 km/tim. Waxaad u leexan doontaa dhinaca Torup. Xawaarehee ugu sareeya ayaa la oggolyahay inaad ku wadid jiirada ama leexashada kadib haddaan wax kale lagu siin?